Garnaqsiga Cilmiga Caafimaadka: Qalinkii Jamal A. Muse
(Hadhwanaagnews) Tuesday, March 13, 2018 13:28:09
Waajibaadka aqoonta Guud, Higsiga Siyaasadda, Lahaanshaha Hanka iyo Hibada Rabbaaniga ah"
" Gorfeynta, Dhuuxa Cilmiga Caafimaadka, Jawaabta Soojeedinihii Saaxiibbaday, Muuijnta Fahan-yaraanta Cilmi ee Bahda Caafimaadka Qaarkeed, Waajibaadka aqoonta Guud, Higsiga Siyaasadda, Lahaanshaha Hanka iyo Hibada Rabbaaniga ah"
Saaxiibbayaal ninkii in badan nooli wax walba waa arkaaye, qaar baa igala dhammaan la'a Jamaaloow waxaad tahay nin caafimaad bartaye, maxaad ku falaysaa suugaanta, siyaasadda iyo xisbiyahannimada, miyaad aayar iska xoogsatid oo ilayn waajibkaaga shaqo waa xidhashada shaadhka cad eh, miyaad Cisbitaal iyo shaybaadh wayn ka hawl gashid?.
Dabcan, dadkani waxay ka kooban yihiin bahda caafimaadka, aqoonyahanno bartay culuumta kale iyo bulshada caadiga ah, waxayna in badan igu soo celceliyeen kalmadahan sare
ku sheeggan. Ka sii darane, waxaan xasuustaa kalmadihii iyo weedhihii aad ka u lidnaa ee ka soo baxay Afka wadaad ka mid ah hageyaasha waawayn ee bahda caafimaadka dalka, xili an dhawaan ku wada hadalay khadka Alleenka. Sababtana waxaan u fahmay inuu igu fogaynayo suugaanta, siyaasadda iyo xisbiyahannimada.
Hadaba, muddo dheer ka dib waxaan lama huraan u arkay in an ka jawaabbo qoddobadan sare ku xusan. Ugu horreyn dooddayda waxaan dhidibo iyo rukumo haya ugu dhigayaa shan "5" qoddob oo kala ah:
1. Waajibaadka cilmiga caafimaadka,
2. Waajibaadka Shaqada iyo xoogsiga,
3. Waajibaadka hibada iyo hanka qofnimo,
4. Waajibaadka aqoonta guud,
5. Waajibaadka dastuurka, dalka iyo waddaniyadda.
Waajibaadka Cilmiga Caafimaadka:
Barashada cilmiga caafimaad ee an bartay waxay koobsanaysaa aagag dhawr ah, waa markaan ka qiyaas qaato manhajkii caafimaad ee an ku ababay:
i. Barashada maaddoyinka diyaar garowga seeska iyo gundhigga cilmiga caafimaadka "Medical basic sciences" sidda Cytology/cell biology, Histology "General and systemic", Anatomy, general physiology, systemic physiology, Embryology, Immunology, Biochemistry, iwm.
ii. Barashada maaddooyinka Kaabidda Cilmiga Caafimaadka sidda Islamic medical ethics, Basic Maths, communications skills applelied to health, Biostatistics, research methology, Medical Ethics, Qulaity conrol iwm.
iii. Barashada Maaddooyinka hoggaaminta siyaasadda iyo maamulka caafimaadka, sidda Community medicine "Health information, demographic and populatins such ethnicity, cultural diversity, believes and values, health service structure, capacity of Health facilities, UN agencies, history of health, iwm".Epidemiology iwm.
iv. Barashada Maaddooyinka ugu muhiimsan "Major courses" ee loo adeegsado adeegga ogaalnimada cudduradda iyo baadhiddooda, sidda:
1. Medical micriology " General micrbiology, bacteriology, virology, parasitology, clinical Immunolgy, Serolgy iyo Mycology" oo ah maaddo wakhti badan lagu dhigto jaamacaddaha ayaa lagu soo ururiyaa dhammaan dhaliyeyaasha cudduradda "Microbial or Germs" aadmiga asiibba iyo sheegidda daawada ku haboon bukaanka.
2. Hematology oo ah barashada cudduradda iyo xaaladdaha ku dhaca dhiigga aadmiga sidda noocyada xaaladdaha dhiig yaraanta, noocyada kansaradda dhiigga ku dhaca, khalkhalka xinjiraha ku dhaca, farsamooyinka baadhidda cudduradda dhiigga, macneynta, fahanka, reebidda/yareynta khaladaadka goobta shaqada, talo bixinta baadhitaanada dheeriga ah iyo kala hufka noocyada cudduradda, "Clinical interpretation/clinical co-relation", calaamaddaha, baadhitaanada qiimeynta waxtarka daawada, iyo la socodka soo kabashada bukaanka.
3. Clinical chemistry "Hormonlogy, Enmology, Body fliuds, general clinical chemistry such as Electrolytes, Blood/urine glucose, Waste/metabolic product substances such as urea, Uric Acids iyo Bilirubin, proteins and lipids iwm " oo ah maaddo lagu ogaaddo degenaanta/bad-qabka iyo khalkhalada ka jira waddnaha, Kalyaha, beerka, marinnada qulqulka dhigga, Maskaxda, boogaha caloosha, xangulaha, la hankaca kala goysyada, dhalmada iwm. Waxaana laga dheehdaa diiradda hormoonada, duxda iyo proteiin nada dhiigga ku jira, biyaha dhiigga "Serum/Plasma" dareereyaasha kala ah "CSF, Synovial fluids, peritonial fliuds, Ascitic fliuds iwm" kaadida/kaajida iyo sindhada.
4. Bloodtransfusion/ Immunohematology/Blood Bank oo diiradda saaraya noocyada dhiigga aadmiga, is qaashada dhiiggaga, kaydinta noocyada dhiigga, ka hortagga xumaanshaha dhiigga, doorashada/xulashada dhiig bixiyaha, dhiirigalinta hanaanka dhiig-bixinta, heerarka dhiig yaraanta, noocyada dhiig yaraanta, halisaha ku gaddaaman dhiig shubidda, waraysiga dhiig-bixiyaha, dejinta shuruucda hanaanka kaydka dhiigga, iwm.
5. Histocytopathology "Cystopathology and histopathology" oo ah maaddo amma maaddooyin leh waajibaadkan shaqo:
Garashada nooca muunadda iyo tubta baadhidda "Recognize the type of specimen and procedures",
Aqoonsiga iyo kala soocidda habdhiska jidhka buka ee bukaanka laga jaray "identification of anatomical pathology",
Ilaalinta iyo midabeynta muunnadda "Staining and fixation of pathological specimen".
Isticmaalka agabka/qalabka baadhitaanaddq sida microtomy, staining equipments, Tissue processing and Impeding.
Baadhidda"screening and pathological diagnosis" Macneynta caafimaad qabka iyo caafimaad daradda bukaanka "Clinical interpretation" iyo sidoo kale isku duba ridka war bixinta guud iyo soo jeedinaha "Reporting and suggestion",
Ogaanshaha sababaha, waxyeelada iyo calaamadaha lagu garto cuddurada ku dhaca unugyada, nuddaha iyo dareeraha aadmiga sidda dhiigga "Aetiology, pathogenesis and features/clinical manifestations".
V. Barashada maaddooyin guud sidda pathology, Toxicology, Pharmacology "General and systemic".
Waajibaadka Shaqada iyo xoogsiga:
Maaddooyinka sare ku xusan iyo in badan oo kale oo aanan halkan ku xusin ayaa aniga i fahansiiyay in aan ka hawlgali karo shaqo ahaan goobahan soo socda:
1. Goob caafimaad,
2. Bare jaamacadeed amma kuliyadeed,
3. Maamul kuliyad caafimaad,
4. Shaqaale dawladeed,
5. Cilmi baadhis caafimaad,
6. U shaqeynta ururada caafimaadka,
7. Hagidda wasaaradda caafimaadka iyo dejinta siyaasaddaha iyo mannaahijta caafimaadka.
F.G: La soco qoddobadan qaarkood weli iimay hirgalin.
Waajibaadka hibada iyo hanka qofnimo:
Runtii, waxaan leeyahay hibo suugaaneed iyo han qofnimo oo igu yidhi Jamaal yarow waa in aad yeelataa ka qayb gal iyo lahaansho han siyaasadeed, aragti hoggaamineed, siyaasad caafimaad iyo mid qaran. Welina waxaan ku jiraa ka midho-dhalinteeda, waxaanan higsanaya hormoodyo hore oo bahda caafimaadka dunida ka dhashay oo guulo waawayn ka dhaliyay dalalkooda, iyaga oo aaminsan aragti siyaasadeed iyo falsafad hoggaamin caafimaad "Political theory, health philosophy and leadership".
Waajibaadka aqoonta guud:
Xaqiiqdii, qofku marka uu diyaariyo shahaadadda koowaad ee jaamacadda, wuxuu soo galaa xayndaabka aqoonta iyo aqoonyahanka. Sidaa darteed, waajibaadka aqoonneed ee an ka bartay Jaamacadda Camuud ayaa i fahansiiyey dhibicda wayn ee ku qoran dulucda dhibeynta aqoonta. Waxaanan ka helay fariin u dhigan, waar hoy Ina Muusow dadka kaga wanaagsanow tacliinta iyo xirfadda waafiga "Major courses" kuu ah, islamarkaanna aragti guud ka yeelo aqoonta guud. Taasi ayaa igu riixday in an kordhiyo xirfadda wax akhrinta, curinta, kaydinta iyo baahinta qoraaladda cilmiga caafimaadka, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhaqanka iyo suugaanta ka hadlaya.
Waajibaadka dastuurka, dalka iyo waddaniyadda:
Dhab ahaantii, ma jiro eray cilmi caafimaad ah oo ii diiddaya ka qayb galka siyaasadda, xisbiyadda, lahaanahaha hanka iyo hoggaaminta, curinta, kaydinta iyo baahinta suugaanta iyo qoraaladda cilmiga iyo aragtida ah. Ma jirto kalmad dastuuri amma diini ah oo iga mamnuucaysa sameynta iyo fulinta qoddobada kor ku sheeggan. Sidaa awgeed waajibaadka dalka iyo waddaniyadda maankayga hadhineysa ayaa i faray ahaanshaha Jamaal ka maanta.
Ugu danbeyntii, intaa sare ku sheeggan oo aan caawa ka qoray kaydka maanka, in ka badan oo hadhsan iyo M.Sc in tropical infectious diseases ayaa weliba ii dihin oo gundhideeda cilmiga caafimaadku yahay:
Fahanka, daraaseynta iyo dhuuxidda cuddurada faafa ee badanaaba ka dhaca waddamada kulkoodu diirimaadka yahay.
Maamulida adeegyada caafimaadka, dejinta siyaasadda caafimaadka iyo dhiirigalinta fayo-dhawrka.
Ogaalnimada xaaladdaha iyo xannuunadda bulshada dunida, heerarka caafimaadka dunida iyo shuruucda cuddurada faafa. Hadaba, wadaad bal soo bandhig hal qormo oo koobaysa dhuuxa iyo dheecaanka aqoonta cilmiga caafimaadka iyo sidoo kale, hal sadar oo ii diidaya fulinta waajibaadyada sare ku xusan. Kolay jawaab keeni maysaane saaxiibbayaal ogaadda sifeynta iyo suganta murtidii Canbaro Nuux Ismaaciil ee ahayd "Anigu uurka oo dedan iyo, iskuma karo Af daacad ah".